Fadeexad Soo Wajahday Duuraan, Tarsan iyo Wasiir Qoorleex
Tilaabo kasta oo hor mar leh marka ay timaado waxaa daba socoto Hagar-daamo iyo Caadufad guracan, taaso saaxada Soomaalida Caado ka noqotay Muddooyinkii ugu danbeeyay.
Taariikhda marka ay aheyd 24-28-April Waxaa Magaalada Kampala ee Caasimada dalka Ugandha ka dhacay Ciyaaro Kubada Koleyga ee magaalooyinka dalalka Bariga iyo Bartamaha Africa, kaasi oo markii ugu horeesay ay ka qeyb galeen koox ka socotay gagaalada Hargeysa iyo Muqdishu .
Ka Qeyb galka Magaalada Hargeysa ee Ciyaarahanii waxa uu sababey Caadifad aad u xoogan kaasi oo ay muujiyeen Duraan, Tarsan, iyo Wasiiru Dowlaha Wasaarada Isboortiga Mr C/llaahi Sheekh Cali. "Qoloocow" oo la tilmaamo in Qadiyada Soomaaliland uu aad ugu soo horjeedo inkastoo kooxdii ka socotey Hargeysa City ay ka mid ahaayeen labadii magaalo oo keliya matallaayey wadanka Soomaaliya sida wargeysyada FIBA Africa laga sheegey.
Magaalada Muqdisho waxaa tartankaasi ugu qeyb galay Koox Wiilal ah kuwaasi oo iska soo aruursaday Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kooxdaas oo uu hogaaminayey gudoomiyaha Jaaliyada isboortiga Soomaaliyeed Khaliif Baajo iyo cayaaryahnkii kubdada koleyga Aayarow bacdamaa maamulka Isboortiga qaasatan Xiriirka Soomaliyeed ee Kubadda Koleyga iyo Guddoonka Gobolka Banadir ku guul dareesteen in ay keenaan koox rasmi ah oo ka socota Muqdisho.
Kooxdaan ma aheyn markii ugu horeesay oo ay ka qeyb galaan ciyaaraha Magaalooyinka Bariga iyo Bartamaha Africa, waxa ay sanadkii hore ee 2011 tartankaan oo kale kaga qeyb galeen Magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya, Kaasi oo uu goob joog ka ahaa Duqa magaalada Muqdishu Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Hadaba Maxuu Tarsan ka yiri Sanadkaan 2012 Marka ay Kooxdii shalay Nairbo uu ugu sacbinaayay ay Kampala Ciyaar kaga qeyb galeen.
Iyadoo ay socoto Tartanka magaalooyinka Bariga iyo Bartamaha Africa ayuu gaaray Magaalada Kampala ee Caasimada dalka Uganda isago ka qey geley shirkii US aid , waxa uu niyada u dhisi waayay ciyaartoydii ku ciyaareesay Magaalada Muqdisho ee uu ka yahay Duqa Magaalada, waxa uu sheegay in ay yihiin ciyaartoy laga soo aruuriyay xaafadaha isla markaana u qalmin in ay ka qeyb galaan tartanka.
Balse waxaa la yaab iyo Amakaag ah, shalay Markii uu tarabuunka Nyayo Stadium ee Nairobi, Kenya ugu sacab tumaayay Tarsan ciyaartoydaasi miyuu saxnaa, mise maanta ayuu Saxan yahay? Natiijada Rasmiga ah Ma ahan Saxnaasho iyo Qalad, balse waxa uu raali ka aheyn qaban qaabada tartankaan oo uu qeyb weyn ku lahaa Eng. Bana Abdalla Ali oo ah Mas'uul labo xil ka haya FIBA ARICA, ka dib markii GOS ka dhaadhicesey arimo been ah.
Duraan Faarax Kusimaha Guddoomiyaha G.O.S ka hor tartanka inta uusan bilaaban waxa uu tagay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, asigoona kulamo la qaatay madaxda FIBA AFRICA Xafiiskooda Kenya, waxa uuna dadaal dheer u galay sidii uu ugu guuleesan lahaa in tartankaasi qaban qaabadiisa uu gacan ku lahaado balse waa uu ku guul dareestay.
Waxa uu carro xoogan ka muujiyay ka qeyb galka tartankaasi ee kooxda Hargeysa, asigoona Tartankaas ku tilmaamay mid aysan aqoon saneen G.O.S.
Sidoo kale waxa uu Carro xoogan ka muujiyay in mar labaad Xiriirka Caalamiga ah ee FIBA AFRICA xil u Magacaabeen Eng. Baana , oo uu horey ugu guuleestay in uu ka saaro maamulka isboortiga Soomaaliya, balse xilligaan uu hadana aad ugu xun yahay la shaqeyntiisa Xiriirka Caalamiga ee Africa.
Kusimaha G.O.S Duraan Faarax, Guddoomiyaha Gobolka Banadir TARSAN iyo Wasiiru Dowlada Wasaarada Isboortiga C/llaahi Sheekh Cali (Qoorleex) ayaa shir 3-geesood ah ku yeeshay Muqdisho, taasi oo aheyd sidii dagaal dhul iyo cir lala gali lahaa Eng. Baana oo dhaq dhaqaaqiisa Isboortiga Caalamka faraha kasii baxaya, iyo Duraan oo walaac xoogan ka qabo in ninka keliya kula tartami karo doorashada Gudoomiyaha GOS ee dhici doonaa 2013 March oo u arko Eng Baana hadii uu isku soo sharaxo, maadaama uu yahey nin aqoon leh isla markaana aad ugu xiran yahey madaxda caalamiga ayna aad ugu taageersan yihiin wax qabadkiisa, daacadna u ah wax qabadka Isboortiga soomaaliyeed.
Shirkooda waxaa Qodobka ugu muhiimsan ahaa: sidii Meesha loogu saari lahaa isla markaan iyagoo ka faaideysanaya caadifada Somaliya iyo Somaliland Dacwad dheer ka qorey Eng. Baana loona gudbiyey Xiriirka Caalamiga ee Aduunka iyo kan Africa, taasi oo dhalisay wada hadal xasaasi ah Maadaama Wasiirka Wasaarada Isboortiga Mohamed Jirde Heseen uu kasoo jeedo Dhulka Soomaaliland.
Dacwadas ayaa la sheegayaa waxyaalaha ay ku eedanayan Eng Baana ayaa waxaa ka mid ah in kooxdii ka socatey Mogadishu oo aanan ogolaanshu ka heysan XSKK uu isagu isku abaabuley. waxey kaloo ku eedeeyen in kooxdii ka soctey magaalada Hargeysa uusan xiriirka raali ka heyn in ay ka qeybgalaan cayaaraha waayo waxey yiraahdeen xiriirkooda ma ixtiraafsana XSKK & GOS.
Waxey kaloo ku eedeeyeen FIBA AFRICA iyagoo ka xun xilka cusub ee loo doortey Eng Baana iyagoo wax wado tashi ah lala sameeynin XSKK iyo GOS inta aanan loo dhiibin xilkaas. Taasi waxey ku tuseysaa aqoon darada ka taagan maamulka XSKK iyo GOS waayo ma ahan wax sharci ah in qof ka loo dhiibayo xilalka caalamiga in uu noqdo qof xubin ka ah Xiriirada ka jira wadankiisa. Sidoo kale ma ahan wax sharci in qof kasta oo ka mid ah xubin ka tirsan Xariirada wadankiisa in uu durbadiiba ka mid noqdo xubin xiriirka caalamiga ama gudiga FIBA Afrika isagoon doorasho ku iman.
C/llaahi Sheakh Cali (Qoorleex) ayaa xabadka u tuntay in la qoro warqadan uu ku taageerayo Duraan iyadoo u adeegsadey in ay waraaqda ka soo baxdey Xafiiska Xiriirka Kubadda Koleyga Soomaaliyeed uuna ku saxiixnaa in uu soo qorey Xoghayaha guud ee Xiriirka Saciid Farah Duale isla markaana la ogeysiiyey G.O.S oo uu ku saxiixnaa magaca Duraan in uu yahey Gudoomiyaha GOS, Wasaarada Isboortiga uuna ku saxiixnaa magaca C/llaahi Sheekh Qoorleex in uu ahaa Wasiirka Isboortiga, iyo Duqa magaalada oo uu ku saxiixnaa magaca Mohamud Nur Tarzan, tiiyoo ugu danbeyn la isla gartay lana gaarsiiyay Madaxda FIBA oo iyadu u taagan xiriirka kubada koleyga caalamiga
Madaxda FIBA waxa ay shaki xoogan ka muujisay iyadoo Muqdisho laga soo saaray Warqada hadana aan la ogeysiin Wasiirka Wasaarada Isboortiga Mohamed Jirdi Huseen iyo Gudoomiyaha XSKK Ibrahim Xuseen Ali "Roombo", waxayna dadaal dheer ka dib ku guuleesatay in ay ogaato in Wasiirka iyo Gudoomiyaha aan waxba kala socon arrintaasi, taasi oo keentay in FIBA ay baaritan ku sameyaan arinka waayo maahan markii ugu horeysay ay dacwad eedeyn ah ka soo qoraan Eng Bana Abdalla Ali oo ka mid ah xubin FIBA Afrika. Iyadoo dacwado eedeyn an ka soo qoreen shaqsiyado sheegana in ay yihiin maamulka GOS iyo XSKK iyagoo mar waliba ka codsanyey in xilka uu u hayo FIBA Africa ka qaadaan.
FIBA ayaa aad ula socota qilaafka ka dhex jira Eng Baana, XSKK iyo GOS ka dib markii la isku qab qabsadey lacagahii deeqda ahed oo ay bixisey IOC sanadkii in soo dhaafey tasoo G.O.S. ay ka xayirtey lacagtii $40,000 loogu talo galey cayaarahii wadamada geeska Africa ama looyaqaan zonev ee kubada koleyga, laguna qabayey Kigali, Rwanda sandkii hore Feb 2011.
Warar ka soo baxaya ayaa sheegaya in Mr Roombo uu aad ugu walaacsan in arinkan ku saabsan XSKK aan wax watashi ah lala sameynin isaga iyo gudiga fulinta taasi oo keeni karto in kalsoonida isaga iyo Xoghayahiisa Saciid Farah ay halkan ku lunto.
Waxaa su'aal mudan Koox ka socota Hargeisa city ugana qeyb gashey tartanka magaalooyinka geeska Africa oo iyagu isa soo abaabulay, qarashkana iyaga iska baxshey kana qeyb galay ciyaar oo kaliya xasaasiyada ay dhalisay, halka Puntland oo uu kasoo jeedo Duran Faarax la siiyay mashaariic soconaya Sanadooyin "A Generations for Peace project" oo lagu hor marinayo dhalinyarada Isboortiga taasi oo ay maal geliso Dowladaha Dalka Kuwait iyo Jordan.
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Isboortiga Qoorleex waxaa loo ka xeeyay Dalka Moscow waxa uuna ka qeyb galay Shirka Madaxda Olompikada halkaasi ku lahaayeen, isagoo wasiirka isboortiga uu kaga xaq lahaa safarkan waayo waxaa halkaa ka soo qeyb galey wasiirada isboortiga ee wadama aduunka. sida Caadada ah G.O.S marka uu wasaarada Imaado Mas'uul cusub waxa ay isku daydaa in ay soo jiidato isla markaana qarashaad iyo safaro u balan qaado si uu ugu shaqeeyo fikirkooda, waxa uuna xilligaan rajeenayaa in uu usoo kicitimo dalka UK si uu ugu qeyb galo Ciyaaraha Olompikada 2012 oo loo balan qaaday, halka wasiirka isboortiha Mohamed Jirdi uu isagu kaga xaq lahaa in uu yimaado lagu maaweeliyey in usan ka qeyb gelin Karin maadaama tiradii wafdiga horey loogu gudbiyey.
Balse talaabada uu qaaday ma tahay mid ka farxin doonta Wasiirkiisa Isboortiga oo dagaal lagula jiro dadka iyo dhulka uu kasoo jeedo, markii horena la ogaa in hadii la horgeeyo qorshaha Dacwada uu ka hor imaanayo. Tarsan waxa dadaal uu ugu jiraa in uu ka mid noqdo Xubnaha Guddiga Olompikada Soomaaliyeed waa hadii uu boos ka waayo Xukuumada Cusub ee la filayo in dalka Soomaaliya ka dhalato, iyadoona ay sii dheer tahay in Duran iyo Asiga wax badan ka ogaayeen Qorshooyin badan oo lagu fashiliyay Bahda Isboortiga isla markaana dannooyin fara badan ay ka fushteen Asiga iyo Duran.
Ilo ka ag dhow Eng Baana ayaa sheegaya in uu diiday in uu ka hadlo dacwada loo direy FIBA balse sheegey in uu aad uga xunyahey arinkan ay ku dhaqaaqeen XSKK iyo GOS. Waxuuna taa raaciyey in shaqsi Soomaali ah in uu xubin ka noqdo FIBA ama xiriirada caalamiga waxey sharaf iyo sumcad u tahey umada Soomaaliyeed loona baahnaa in ay ka faaideystaan. Balse uu sheegey in qaar kamid ah maamulka GOS iyo XSKKay u arkaan ama ka muujiyey walaac xilalka aan u hayo xiriirada caalamiga, waana nasiib daro.
Eng Baana ayaa intaa ku darey in uu san haba yaraatee wax welwel ama walaac uu san ka qabin natiijada ka soo bixi doonto dacwadan lagu eedeyey arimahan, isagoo sheegey in uu kalsooni buuxda ka heysto xiriirka caalamiga iyo kan FIBA Afrika tasoo cadeyn u ah xilkii 3aad ee FIBA Africa ay doorteen bishii hore ee April 2012.
W/Q. Salah Hassan Omer [Salah Dheere]